Windows 10, 8 အတွက် မြန်မာယူနီကုဒ် သုံးစွဲဖို့ – Unicode Today
Windows 10, 8 အတွက် မြန်မာယူနီကုဒ် သုံးစွဲဖို့
Windows မှာပါတဲ့ ကီးလက်ကွက်ကို ဖွင့်နည်းကတော့ အောက်ပါလင့်ကတဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကီးလက်ကွက်ကို ဖွင့်ပြီးပြီ task bar ပေါ်မှာ မြင်ရပြီဆိုရင် မည်သည့် Word Processing, Text Editor မှာမဆို လက်ကွက်ရွေး ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
Windows 10 မှာပါလာပြီးသားဖြစ်တဲ့ လက်ကွက်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် တခုရှိတာက သူက နောက်ကွယ်မှာ ဘာ Script code, regular expression code မှမရှိလို့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ရိုက်နှိပ်ပုံ အစီအစဉ်တွေကို လိုက်ပြင်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါရိုက် ဒါထွက် စနစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စာလုံးစီပုံ ဗျည်း၊ ဗျည်းတွဲ၊ သရ အစီအစဉ် အတိုင်းရိုက်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာပြရရင် သဝေထိုးဟာ သရတခုဖြစ်တဲ့ အတွက် ပင့်၊ ရစ်၊ ဆွဲ၊ ထိုး တို့၊ မူလဗျည်းတို့နောက်မှသာ ရေးသားရပါတယ်။
အစက်အဝိုင်းပါတဲ့ သရစာလုံး တလုံးတလေက အပြင်ထွက်နေတယ်၊ ဗျည်းနှင့် မတွဲသွားဘူး၊ ဘေးထွက်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါရိုက်နှိပ်တဲ့ အစီအစဉ်မှားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန် အစီအစဉ်နဲ့ ပြန်ရိုက်ပေးရင် မှန်နိုင်ပါတယ်။
အနည်းငယ်လေ့ကျင့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေကြပါတယ်။ Microsoft ရဲ့ error အကင်းဆုံး၊ လုံခြုံမှုအရှိဆုံး Keyboard တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Notepad ဖွင့်ပြီး လက်ကွက်ရွေးကာ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Windows Native ကီးလက်ကွက် မသုံးချင်ဘူး။ သဝေထိုးကို နောက်ကရိုက်ရတာမကြိုက်ဘူး ရှေ့မှာအရင်ရိုက်ချင်တယ်၊ သဝေထိုးကို အမြင်အတိုင်းရိုက်ချင်တယ် ဆိုရင် Smart Keyboard ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Smart Keyboard ဆိုတာကတော့ သဝေထိုးကို ရှေ့ကထားရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်။ ဒါအပြင် အပေါ်အောက် သရတွဲများ အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် အမှန်အဖြစ် ပြန်တည့်မှတ်ပေးတယ်။ သုံးစွဲသူရဲ့ စာရိုက်အစီအစဉ်တွေကို Normalize လုပ်ပေးတဲ့ Keyboard အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Smart Keyboard တွေက တော့ Keymagic2နှင့် Keyman9ကီးဘုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10, 8 တွေအတွက် ဒီ Smart Keyboard ၂−ခုထဲကပဲ သုံးစွဲဖို့ ထောက်ခံပါတယ်။
နောက်ဆုံး update ကတော့ “KeyMagic-v2.0Pre-4” အမည်ပေးထားပါတယ်။ Windows Vista ကနေ Windows 10 ထိ (32 bit 64 bit) ပါသုံးလို့ရတယ်လို့ သူ့ဝက်ဆိုက်မှာ ဆိုထားပါတယ်။ လက်ကွက် အမျိုးအစား ၅ မျိုး တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပြီး နောက်ထပ် နောက်ထပ် စိတ်ကြိုက်လက်ကွက်များကို လည်းထည့်သွင်း သုံးစွဲလို့ ရပါတယ်။ အသုံးမလိုတဲ့ လက်ကွက်ရှိပါကလည်း ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ လက်ကွက်ဇယားကို On-Screen လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ Mac, Linux အတွက်လည်းထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ OpenSource project ဖြစ်ပါတယ်။
Keymagic သွင်းပြီးလို့ ဖွင့်ကြည့် လိုက်ရင် လက်ကွက် ၅ မျိုးတပါတည်း ထည့်ပေးထားတာ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁. ဇော်ကုတ်, ၂. ဇော်ဂျီ, ၃. မြန်စံ, ၄. my-Win, ၅. Myanmar3X တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၅. Myanmar3X ကတော့ Myanmar3လက်ကွက် ကိုထပ်ပွားပြီး ဂဏန်း သုည နှင့် ဝလုံး၊ ရကောက် နှင့် ခုနစ်၊ ၎င်း ကို လေး စသည့် အသုံးမှား နိုင်တာမျိုး အတွက် ပြင်ပေးတဲ့ လက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ၅ မျိုးထဲကမှ အသုံးမလိုဘူးသေခြာရင် ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Select လုပ်ပြီး Remove လုပ်ရုံပါပဲ။ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်ကွက်တွေ ထည့်ချင်သေးလား Add နှိပ်ပြီးထည့်လိုက်။ တိုင်းရင်းသားလက်ကွက်တွေနှင့် အခြားလက်ကွက်တွေရဲ့ လင့်က
Keymagic တွင်အသုံးပြုသော မြန်စံ(smart) ကီးဘုတ်၏ စာစီစာရိုက်စနစ်အသုံးပြုပုံ
Keyman Desktop9ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း Keymagic လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဝေထိုးအရင်ရိုက်လို့ရတယ်။ သရတွဲများ အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် အမှန်အဖြစ် ပြန်တည့်မတ်ပေးတယ်။ Myanmar2 နဲ့ အတူထွက်ခဲ့တဲ့ Keyman6ကိုမသုံးသင့်တော့ပါဘူး။ ဒီဗားရှင်းက Windows 10, 8 တို့နဲ့ပိုမိုသင့်တော်ပါတယ်။ Internet Explorer IE version9နှင့် အထက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
Keyman အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဒီ ၂-ခုကို ဒေါင်းပြီးထည့်သွင်းရပါမယ်။
၁။ Keyman Desktop 9.0
၂။ Keyboard Layouts ( လက်ကွက်များ )
နံပါတ်-၁ Keyman Desktop9exe ကိုအရင် Install လုပ်ပါ။ ပြီးမှ နံပါတ်-၂ ကိုဆက်လက် Install လုပ်ရပါမယ်။ ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း Next, Ok နှိပ်ပေးရုံပါပဲ။
– Myanmar3std လက်ကွက်ကတော့ Myanmar3 လက်ကွက်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလက်ကွက် သုံးမျိုးစလုံးဟာ မည်သည့် ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုမဆို ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar3std ဘေးက မီးခိုးရောင် ? နှိပ်ပြီး Myanmar3std User Instructions(Myanmar) ကိုနှိပ်ကြည့်ပါက လက်ကွက်ဇယားနှင့်တကွ စာရိုက်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြသားထားတာ တွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာရိုက်နည်းများ အတိုင်း မည်သည့်ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုမဆို ရိုက်နှိပ်နိင်ပါတယ်။
Myanmar3std ရွေးပြီး Shift+Alt+K သို့မဟုတ် OnScreen Keyboard ကိုရွေးနှိပ်ပါက On Screen လက်ကွက်ဇယားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရုံးတွေမှာ အသုံးများနေတဲ့ Office 2016 နှင့် အဆင်မပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ Myanmar3 ကို Office word 2016 တွင်သုံးစွဲမယ်ဆိုပါက Ligature feature ကိုအရင် သတ်မှတ်ပေးထားမှ စာအမှန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါက စာအမှန် မထွက်ဘဲ တကွဲတပြား ဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ် ပါတယ်။
Ligature feature သတ်မှတ်နည်း
Office word 2016 တွင် Ligature feature မသတ်မှတ်ဘဲ Myanmar3 စာအမှန်မထွက်ပါ။ ဒီနည်းအတိုင်းပြုလုပ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Microsoft Word 2010, 2013, 2016 စာအမှန်မထွက်လျင်
တခုရှိတာက Myanmar3 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ Document file ကို နောက်တကြိမ်ပြန်ဖွင့်ရင် Myanmar Text font အဖြစ်အလိုလျောက်ပြောင်းသွားတဲ့ ပြဿနာကြုံနေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက Myanmar3 font မှာ version အသစ် နှင့် အဟောင်း ၂မျိုးစလုံး သုံးနေကြတော့ စက်တလုံး နှင့် တလုံး စာလုံးအရွယ် မတူတာတို့ အောက်မြစ် နှင့် အသတ် မတွဲတာတို့ ရှိနေတတ်ကြလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် mm3-multi-OS.ttf တမျိုးတည်းထားသုံးသင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်က ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ “Pyidaungsu” ဖောင့်ကို Windows 10 မှာ Office 2013, 2016 ဖြင့် တွဲဘက်သုံးစွဲနိုင်အောင် အထူးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Myanmar3 font မှာကြုံရတဲ့ ပြဿနာမျိုး မရှိနိုင်ပါဘူး။ Version နံပါတ် ၂မျိုးထုတ်လုပ်ထားပြီး Regular နှင့် Bold ၂မျိုးစီပါဝင်ပါတယ်။
Excel တွင် မြန်မာဘာသာ သုံး နံပါတ် ပုံစံများ ပြုလုပ်ခြင်း
Keyman9Keyboard